Maguta eCanada neMamiriro ekunze Akanakisa | Absolut Kufamba
Canada inyika yakakura kwazvo, iine nzvimbo dzakasiyana siyana zvekuti kuti hapana imwe chete 'yeCanada mamiriro ekunze.'Matunhu emahombekombe anosiyana nemapurazi nemapurovhinzi emakomo kumadokero, saka tembiricha nemamiriro ekunze atinogona kuwana pazuva rimwe chete kunzvimbo dzakasiyana siyana zvakanyanya kubva kunzvimbo yekumasango yakasvibira. ¿Maguta api muCanada ndiwo akakurudzirwa kushanya zvinoenderana nenguva yegore?
Chivabvu kusvika munaGunyana inowanzo iri mwaka iyo vanhu uye kushanya kweCanada vanoshandisa kudzika musasa uye kufamba kunze; Chero ipi yemwedzi pamazuva iwayo unogona kuenda chero kupi uchiri kunakidza kunyangwe, uchitanga kunzwa kuwedzera kwetembiricha, sezvo vachiita senge vari kuchinja mumafuro, inova ndiyo nzvimbo yekutanga kwayiri kudziya pakutanga kwegore uye anogara achidziya gare gare, ari iye ski uye snowboard mwaka pakati paNovember naMarch, kukwanisa kuwedzera kusvika Kubvumbi zvichienderana nemvura uye / kana dutu.
1 Chokwadi chinoshamisa pamusoro pemamiriro ekunze eCanada
2 Kanadha Anodziya Maguta Munguva Yechando
3 Uye muzhizha? Canada maguta ane inotonhora mamiriro ekunze
Chokwadi chinoshamisa pamusoro pemamiriro ekunze eCanada
Canada yakanaka kwazvo nyika inotonhora kwazvo, ichikwikwidza neRussia kwekutanga senyika inotonhorera kwazvo pasirese, iine tembiricha yegore nezuva ye -5 / -6ºC.
Vazhinji veCanada vanofa gore rega rega kubva pakuratidzwa nekutonhora kwakanyanya kutonhora kupfuura kubva kune zvimwe zviitiko zvechisikigo, maererano nedata kubva kuStatistics Canada. Avhareji yevanhu 108 vanofa gore rega kubva kunotonhora, nepo gumi nevanomwe chete vachikundwa nezvimwe zviitiko zvine chekuita nemasikirwo.
Iwo Makuru Mabhangi e Newfoundland inoonekwa se nzvimbo iri kure kwazvo pasirese. Nzvimbo iyi inosvika makumi mana muzana yakafukidzwa nemhute munguva yechando uye inosvika makumi masere nemasere muzana muzhizha.
Yerudzi irwo pasina mubvunzo rwunozivikanwa kwazvo nekuda kwarwo Mamiriro ekunze matsvaZvinotaridza sekushamisa kuti maCanada ndivo vakagadzira iyo UV indekisi, chiyero chekusimba kwezuva re ultraviolet radiation mune iyo yekupisa kwezuva. Sezvo UV inowedzera, mwaranzi yezuva inogona kukuvadza zvakanyanya ganda, maziso, uye immune system. Muna 1992, Zvakatipoteredza Canada masayendisiti yakagadzira indekisi sechishandiso chekuchengetedza hutano hwevanhu veCanada, uye iko zvino yave kushandiswa munzvimbo dzinosvika makumi mana neshanu pasirese.
Kune chirevo muCanada chinoti "Kana iwe usingade mamiriro ekunze, mira maminetsi mashanu." Izvo hazvingambove zvakavimbika kupfuura mukati Pincher Creek, Alberta; uko iko kwakanyanya kupisa tembiricha shanduko muCanada nhoroondo yakanyorwa: mercury yakasimuka kubva -19ºC kusvika 22ºC saizvozvo imwe chete awa.
Tevere tichazoziva ndiwo maguta anodziya kwazvo muCanada panguva yechando kana inotonhorera panguva yezhizha, saka tinogona kuronga nzira yedu zvinoenderana nenguva yegore yatinoshanyira nyika.
Kanadha Anodziya Maguta Munguva Yechando
Kuti uwane inodziya mamiriro ekunze panguva yeCanada yechando, iro guta guru ratingawana kumabvazuva kwe Rocky Makomo, ayo anoshanda sedziviriro yakakwana yekuchengetedza kupisa kwezuva mukati memwedzi iyoyo yemwaka uno, maguta makuru matatu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwe british columbia zvakakwana kuwana izvo zvatiri kutsvaga ndizvo: Victoria, Vancouver uye Abbotsford.
Mumaguta aya eCanada nguva dzose Tichawana husiku hunotonhora uye hunyoro husiku hwechando kupfuura munzvimbo zhinji dzenyika, mazuva mashoma nechando nehusiku zvine tembiricha shoma shoma.
Mune mamwe matunhu eCanada, maguta anotonhora kwazvo echando ari mu Kanadha yeCanada yeOntario nematunhu egungwa. Pakati pavo, Ontario maguta e Toronto, Windsor naSt. Catharines, iyo inomira pakuve nemamiriro ekunze echando anogara achidziya kupfuura mamwe ese.
Victoria, iguta risingapikiswi rinotungamira pakati pe maguta makuru muCanada yekudziya muchando. Iwo madhigirii akati wandei uye nemazuva ari pamusoro pemamwe nekuda kwekudziya kwekunze Victoria ndiro chete guta reCanada rakakura kutendera kuti tembiricha irege kudzika pasi -10 degrees Celsius (14 degrees Fahrenheit) munguva yechando.
Uye muzhizha? Canada maguta ane inotonhora mamiriro ekunze
Mutsvene John weNewfoundland Ndiro rinonyanya kukosha guta reCanada kana tikataura nezve maguta ane inotonhorera mamiriro ekunze munguva yezhizha. Iyo ine yakaderera yepakati zuva tembiricha yezuva nezuva uye inowana iwo mashoma mashoma mazuva anopisa zvakanyanya mumwedzi waJune, Chikunguru naAugust.
New brunswick, haisi imwe chete yeiyo maguta makuru muCanada, asi inoshandiswa zvakare kuyera tembiricha yezhizha tembiricha kuti uverenge iyo yepasi yepakati muvhavha uye mashoma mashoma mazuva anopisa.
Zvakare zvinowirirana mu gumi pamusoro peyese maitiro yaishandiswa kuona kana guta richizotipa "Zhizha rinotonhora" ndiCalgary, Alberta; Edmonton, Alberta uye Victoria uye Vancouver muBritish Columbia. Maguta eCanada akaverengerwa muzvikamu izvi ndiwo makuru emadhorobha matunhu munyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Maguta eCanada ane yakanakisa mamiriro ekunze
Lourdes Rizo akadaro
Mhoroi, ndiri kufarira kuenda kunoshanda kuVictoria, handizive kuti zvingaite sei.
Pindura Lourdes Rizo
Carmen Morales chinobata mufananidzo akadaro
Ndiri mukadzi ane rugare weMexico
Ndine mvumo yekuenda kuCanada
Ini handizive chero munhu anogona kunditsigira nekugara ini ndichiwana basa ndapota !!
Pindura Carmen Morales
Maria Lopez akadaro
Tinoda kugara muCanada. Murume wangu igweta. Ndiri accountant uye tine vana 3 vane makore 17 ne14 uye mwana ane mwedzi mina. Ndeapi mikana?
Pindura María López
Fabiana, ini ndiri mumamiriro akafanana newe. Unobva kuguta ripi? Ndanga ndichifunga zvekuenda kuCanada asi chinhu chete chinondinetsa ndechekuti hauna munhu ipapo. Zvisinei, ichiri nyika yakabudirira
ELDY MILENA BASCOPE CASTRO akadaro
Mhoroi, ndiri Miilena anobva kuBolivia wehunyanzvi ing. kushambadzira ini ndinoshanda mubazi rezvemari uye ndiri kufarira kwazvo kuenda kuCanada nekuti kune ramangwana rehupfumi riri nani muhupenyu hwangu newemwanakomana wangu, chokwadi ndechekuti kuno kuBolivia munhu wehunyanzvi haakosheswe, mihoro yakaderera kwazvo uye hazvina kukwana kunyange kuvaka imba yako.
Ndinoda kugara nekushanda muOntario mune chero ripi zvaro remaguta eToronto, Windsor neCatharines
Pindura kuna ELDY MILENA BASCOPE CASTRO
Lizbeth engel akadaro
Ndiri kufarira kuenda kuCanada kunogara nekushanda ndiri nyanzvi yeyunivhesiti uye ndine makore 57 munyika yangu pazera rino haugone kuwana basa rechinhu chero chakaita semurume wangu nemwanakomana ari pasi pemakore gumi nemanomwe maitiro ekuziva zvekuita ita
Pindura Lizbeth Engel
Elvy Del Carmen Doria Ll akadaro
Ndinoda kuenda nemhuri yangu kunogara kuCanada, ndinofanira kuitei?
Pindura Elvy Del Carmen Doria Ll
Jhon jairo garcia akadaro
Manheru akanaka, ini ndiri Colombian, zita rangu ndinonzi Jhon uye ndiri mudzidzisi wekuvaka uye anoshanda maneja.Ndine makore makumi mana nemasere uye mudzimai wangu ane makore makumi matatu nerimwe, tine vana vaviri vadiki.Tingade kuenda kuCanada.Iri basa mikana iripo?
Pindura Jhon jairo garcia
Paris Antoniano akadaro
Ndiri mugari weMexico / weSpain muMexico anofarira kutsvaga basa rekuveza, (ridaidze kuti kuvaka kana fenicha). Ndine makore gumi nemaviri ekuziva.
Vancouver kana Toronto ndidzo nzvimbo dzandinofarira, asi ini ndakavhurika kune chero imwe nharaunda.
Ndinoonga chero zvataurwa.
Pindura kuParis Antoniano
Diana Duran akadaro
Mhoro ini ndoda kuenda kunoshanda kuCanada kuti ndibatwe
Pindura kuna Diana Duran
Mazuva akakosha uye mazororo muMorocco